A na -ekpughe njirimara na nkọwapụta igwefoto nke Sọpụrụ 20 na 20 Pro | Androidsis
E gosipụtara njirimara na nkọwa nke igwe foto nke Honor 20 na 20 Pro
A ka nwere ihe dị ka izu abụọ nke ichere tupu mmalite ahụ Sọpụrụ 20 usoro. Site na ọkwa ọkwa nke tọhapụ ụbọchị N'ime ọnwa gara aga, nkọwa gbasara ekwentị na -apụta na weebụ.
Taa adịghị iche na, ọzọ, Sọpụrụ 20 na ụdị Pro ya bụ ndị ngagharị iwe, n'ihi na nhazi nke igwefoto nke ọnụ abụọ a agbapụtala.
1 Na-asọpụrụ 20
2 Na-asọpụrụ 20 Pro
Nke a bụ sistemụ igwefoto quad Sọpụrụ 20 # Sọpụrụ20 pic.twitter.com/sqEAx9P5OQ
- Teme (@ onyekwena950) Nwere ike 7, 2019
N'adịghị ka ihe ụfọdụ ndị ozi kwuru na mbụ, Sọpụrụ 20 ga -enwe nhazi igwefoto quad. Atọ n'ime igwefoto ga -ekerịta otu ụlọ, ebe ihe mmetụta nke anọ ga -agbachi nhazi ahụ n'aka nri. (Mara ya: Sọpụrụ 20 Lite: smartphone ọhụrụ ahụ)
Ihe mmetụta mbụ nke Sọpụrụ 20 bụ igwefoto ihu obosara nwere ihu nke 16 MP nwere oghere f / 2.2 yana oghere nlele nke 117 Celsius. Igwefoto isi na -esote ya, nke bụ 586MP 48 µm Sony IMX1.6 ihe mmetụta nwere nha ihe mmetụta 1/2 ”yana oghere f / 1.8. Igwefoto bụ isi na-eji algorithm 4-in-1 Light Fusion, na -agbapụ na mbụ na 12 MP yana ijikọta onyonyo iji nweta mkpebi 48 MP.
Ihe mmetụta nke atọ bụ 2 MP f / 2.4 na 1.6 depthm igwefoto inyeaka dị omimi maka onyogho. N'okpuru igwefoto a bụ ọkụ ọkụ. Ihe mmetụta ikpeazụ bụ 2 MP macro 1.75 µm na oghere f / 2.4.
Nke a bụ sistemụ igwefoto Quad 20 Pro, lee nnukwu ụlọ f1 / 1.4 # Sọpụrụ20Pro pic.twitter.com/4k1OQKIdnr
Sọpụrụ 20 Pro nwere atụmatụ igwefoto ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị mbụ ya, mana ejiri ọtụtụ atụmatụ buru ya. Ihe mmetụta izizi ọ na-akwadebe bụ otu 16 MP igwefoto sara mbara sara mbara dị ka onye na-abụghị ọkachamara. Ọ na-ejikwa otu 586 MP Sony IMX48 sensọ, mana nwere nnukwu oghere f / 1.4 na OIS 4-axis..
Igwefoto foto na -agbada ihe mmetụta omimi nke 2 MP iji nweta 8 MP telephoto oghere nwere oghere f / 2.4. Nke a na-enye mbugharị ngwa anya 3X yana nwekwara OIS 4-axis. Kama ọkụ ọkụ na -enwu n'okpuru ihe mmetụta nke atọ a, ihe ị nwere bụ modulu laser autofocus maka "ngwa ngwa na nke ziri ezi autofocusing."
N'aka aka nri nke ụlọ igwefoto mbụ enwere nke ọzọ maka oghere macro nke 2 MP nke 1.75µm na oghere f / 2.4, na mgbakwunye ọkụ ọkụ.
Emebere Honor 20 Lite na Spain
Sọpụrụ 20 Pro bụ onye nwere igwefoto kacha mma. Enweghị nkwụsi ike onyonyo na Sọpụrụ 20 pụtara na ọ gaghị adị mma maka ịdekọ vidiyo. Sọpụrụ 20 Pro bụ n'ezie ngwaọrụ nsọpụrụ na -eche ihu megide OnePlus 7 Pro, anyị enweghị ike ichere ịhụ ekwentị nwere arụmọrụ igwefoto kacha mma.
Sọpụrụ 20 na Sọpụrụ 20 Pro nwere ike nwee ntọala igwefoto dị iche iche, mana ha abụọ ga -ebugharị site na chipset Kirin 980. Ndị a ga-abịa na ngosipụta OLED na nyocha mkpịsị aka mkpịsị aka, yana atụmatụ na nkọwa ndị ọzọ kwesịrị ekwenti elu. A ga -ekwupụta ha abụọ na Mee 21 na London.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » E gosipụtara njirimara na nkọwa nke igwe foto nke Honor 20 na 20 Pro
Twitter enyerela anyị ohere ịwekọ tweets na foto, vidiyo na GIF
Beta nke abụọ nke gam akporo Pie maka OnePlus 3 na 3T dị ugbu a